काठमाडाैं : पूर्व मन्त्री एवम्‌ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लोकेन्द्र विष्टमगरले आफूलाई खान-लाउन र चल्न नजान्ने भन्दै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हेपे’को बताउनु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफूलाई खान-लाउन र चल्न नजान्ने भन्दै हे’पेको बताउनुभएकाे हाे ।
मेरो आ’दर्श स्ख’लित भएको दिन !’ शीर्षक राखेर उहाँ फेसबुकमा लेख्नु हुन्छ- ‘एकदिन पोखरा एअरपोर्टमा क.प्रचण्ड र क.बाबुरामसँग थिए म,भीआइपी कक्षमा । मैले लगाएको पु’रानो थो’त्रो ज्या’केटले उहाँहरुलाई लज्जा वो’ध भएछ क्यारे ! मुन्टो निहु’राएर कुरा गर्नुभो !
मैले सुनिरहे ! म अलि पर थिए । सारमा “लगाउन,खान र चल्न नजान्ने” भनेर मेरो च’र्को आ’लोचना भयो । मैले नसुने झैं गरेर सुनिरहे कान थापेर । मलाई न’मीठो लाग्यो !’ उहाँले आफ्नो आ’दर्श नेतृ’त्वले आदर्शकै खिलाफ खिसि’टिउरी गरेको पनि बताउनुभएकाे छ ।
उहाँले लेख्नुभएकाे छ- “आ’र्थिक मित’व्ययिता, सादाजीवन उच्च विचार, कडा परि’श्रम …” हाम्रा आदर्श थिए । पार्टीको आ’दर्श र नीति भन्दा बाहिर जानु मर्नु जस्तो लाग्थ्यो । आफ्नो आदर्श ने’तृत्वले आ’दर्शकै खि’लाफ खिसि’टिउरी गरेको सुनेर-भोगेर भन न न न….चक्क’र आयो !
तर, समालिएर बसे र अडिए ! यस्ता च’क्कर र घनच’क्करहरु दर्जनौं भोगियो ! अनि लाग्यो मेरो पार्टी र आदर्श त उहिल्यै सक्किएछ ! म उल्लु रहेछु, धत् मोरा भनेर आफैलाई बेस्सरी स’रापेर स्वे’च्छिक अवकास लिइयो !
राजनीति छाडेर कृषि व्यवसायमा लाग्नुभएकाे पूर्व मन्त्री विष्टमगरले अहिले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१८ तुलसीपुर–घोराही सड’कखण्ड’सँगैको जग्गामा ‘ड्रागन’खेती गर्दै आउनु भएको छ । माओवादी युद्ध हुँदै मन्त्रीसमेत बन्नुभएका उहाँ केही व’र्षयता पू’र्णकालीन राजनीति छाडेर कृषि कर्ममा होमिनुभएकाे छ ।
उहाँले लेख्नुभएको स्टाट्स जस्ताको तेस्तै !